Otu R & D - Shandong Runte Refrigeration Technology Co., Ltd.
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ anyị na-agbaso echiche mmepe sayensị mgbe niile, na-ewere nyocha teknụzụ na mmepe na ọzụzụ ndị ọrụ dịka akụkụ dị mkpa nke mmepe anyị. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị injinia etiti na ndị agadi 18, gụnyere ndị injinia dị elu 8, ndị injinia etiti 10, na ndị injinia inyeaka. Enwere mmadụ 6 nwere ngụkọta nke mmadụ 24, nwere ahụmịhe ọrụ bara ụba na teknụzụ refrigeration ọkachamara, ha sokwa n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ na mpaghara agbụ oyi.
Ndị otu R&D anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 24, nwere onye isi R&D 1, ahụmịhe afọ 30 na ụlọ ọrụ refrigeration, yana injinia dị elu. Enwere otu R&D, otu R&D abụọ, na otu R&D atọ n'okpuru nche anwụ ya, yana ngụkọta nke ndị njikwa R&D 3, ndị ọkachamara R&D 14 na ndị enyemaka 6 R&D. Ndị otu R&D nwere nzere bachelọ ma ọ bụ karịa, gụnyere ndị nna ukwu 7 na ndị dọkịta 3. Ọ bụ otu nchọcha na mmepe teknụzụ nwere ahụmahụ na nke ọhụrụ.
Ụlọ ọrụ anyị na-etinye aka na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ na usoro ọhụrụ, ma tinye ego dị ukwuu na nyocha na mmepe kwa afọ, ma nweta ezigbo nsonaazụ. N'ime ha, anyị emeriwo utu aha nsọpụrụ nke Jinan City High-tech Enterprise na Jinan City Technology Center, ma tinye akwụkwọ maka ọtụtụ Patent.
Runte------Jiri ike nke teknụzụ na nyocha sayensị wee duru azụmahịa yinye oyi gị.